एयरोस्पेस र रक्षा उद्योग मा आपूर्ति श्रृंखला लागत कम
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » एयरोस्पेस र रक्षा उद्योग मा आपूर्ति श्रृंखला लागत कम
गेस्टपोस्ट • तार समाचार सेवाहरू
एयरोस्पेस एण्ड डिफेन्स (ए एण्ड डी) आपूर्ति श्रृंखलाहरु एक विशेष गरी कठिन मौसम को सामना गर्दै छन्।
कोभिड 19१ pandemic महामारीले सम्पूर्ण उड्डयन उद्योगलाई घुँडा टेकेर ल्याएको छ, निर्माता र आपूर्तिकर्ता समान उत्पादनको स्तरमा फर्कन झगडा गरीरहेका छन्।
अप्ठ्यारो अर्थव्यवस्थाहरु को प्रतिक्रिया मा सरकारहरु, सैन्य उपकरणहरुमा A&D मा आफ्नो खर्च घटाएका छन्।
निजी व्यवसायहरु, एक समान चाल मा, एयरोस्पेस उपकरण मा खर्च कम भएको छ।
यो प्रवृत्ति धेरै फर्महरु छ कि एक विश्वसनीय छैन छोडिएको छ एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला साझेदार रिलि। तर यो मात्र A&D आपूर्ति श्रृंखला हो कि पीडित छैन। Biden प्रशासन भर्खरै आयोजित एक 100 दिन आकलन महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को। खोजहरु आपूर्ति श्रृंखला उद्योग मा विभिन्न कमजोरीहरु देखाए।
संयुक्त राज्य अमेरिका विगत २० बर्षमा विश्वव्यापी अर्धचालक उत्पादन को ३ percent प्रतिशत बाट घटेर १२ प्रतिशत भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका अब मात्र परिपक्व तर्क चिप्स, एक उन्नत अर्धचालक प्रविधि को 37 देखि 12 प्रतिशत उत्पादन गर्दछ। राष्ट्रपति को अनुसार, यो कम प्रतिशत "अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला को सबै खण्डहरु साथै हाम्रो दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धा को लागी खतरा छ।"
मूल्यमा गिरावटको कारण बिडेन प्रशासनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि क्याथरीन ताईको नेतृत्वमा एक व्यापार "स्ट्राइक फोर्स" को घोषणा गरेको छ, जसले "महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाहरु लाई बिगार्ने अनुचित व्यापार प्रथाहरु बिरुद्ध एकपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवर्तन कारवाही को प्रस्ताव गर्दछ।"
दुबै सरकार र वाणिज्य हितधारकहरु आफ्नो एयरोस्पेस आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी एक लागत प्रभावी तरीका मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, ए एण्ड डी निर्माताहरु लाई सौदा प्राप्त गर्न र मुनाफा मार्जिन कायम राख्न लागत घटाउन आवश्यक छ।
यहाँ सानो र मध्यम आकार को मद्दत को लागी केहि चरणहरु छन् उड्डयन निर्माताहरु कम लागत को लागी आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन लाई प्रभावित गर्न सक्छन्:
1. आपूर्ति श्रृंखला डिजिटाइज गर्नुहोस्
एक शास्त्रीय आपूर्ति श्रृंखला मोडेल रैखिक काम गर्दछ, र नीति निर्माताहरु लाई सामान्यतया समग्र आपूर्ति श्रृंखला को एक संकीर्ण परिप्रेक्ष्य छ, सम्भावित ढिलाइ र बढेको खर्च को लागी।
एक डिजिटलाइज्ड आपूर्ति श्रृंखला, तथापि, राम्रो स्पष्टता, साझेदारी, लचीलापन, र शीघ्र प्रतिक्रिया को लागी आपूर्ति श्रृंखला को एक गहन दृश्य प्रदान गर्दछ। सरल भाषा मा भन्नुहोस्, डिजिटलाइजेशन आपूर्ति श्रृंखलाहरु लाई सुव्यवस्थित गर्न डाटा को उपयोग गर्दछ।
सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला मा डाटा को एकीकरण संगठित र सीमित मानव सहभागिता संग आपूर्ति को अन्तिम गन्तव्य निर्धारण गरेर आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलन मा मद्दत गर्दछ।
उदाहरण को लागी, शेयर लिने अनुप्रयोगहरु, निगरानी प्रणाली, चुस्त उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, र अन्य आत्म-नियमन मिसिनहरु लाई एक अधिक छिटो र लचीलो प्रणाली को लागी आपूर्ति श्रृंखला संरचना मा शामिल गर्न सकिन्छ।
तपाइँको आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटलीकरण प्राप्त गर्न को लागी, तपाइँ एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कम्पनी संग साझेदार को आवश्यकता हुन सक्छ। अमेरिका मा धेरै विकल्पहरु छन्। यो गाइड को सूची सबै भन्दा राम्रो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कम्पनीहरु कि एयरोस्पेस र रक्षा क्षेत्र मा सक्रिय छन्।
2. लागत उपकरण को उपयोग
आपूर्तिकर्ता खर्च र आपूर्ति श्रृंखला दर बुझ्न एयरोस्पेस र रक्षा निर्माताहरु लाई आफ्नो आदेश को लागी तर्कसंगत मूल्यहरु प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै निर्माताहरु मानिन्छ कि आपूर्तिकर्ता लागत निश्चित छन्। जे होस्, केहि लागत परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि निर्माता सही जानकारी छ। एक रणनीतिक लागत विश्लेषण जाने बाटो हो।
अमेरिकाका अनुसार संघीय अधिग्रहण विनियमन (एफएआर) 15.407-4, एक रणनीतिक लागत विश्लेषण "ठेकेदार को मौजूदा श्रमशक्ति, विधिहरु, सामाग्री, उपकरण, अचल सम्पत्ति, अपरेटि systems्ग सिस्टम, र व्यवस्थापन को अर्थव्यवस्था र दक्षता को मूल्यांकन गर्नु पर्छ।"
हामी एक उचित मूल्य निर्धारण प्रणाली को लागी दुई मोडेल को सिफारिश गर्दछौं:
लागत-मोडेल: यस मोडेल मा, ठेकेदार एक उत्पाद को उचित बजार मूल्य निर्धारण गर्न को लागी वाणिज्यिक बजार मूल्य निर्धारण र अर्थशास्त्र को उपयोग गर्दछ। यो मोडेल आपूर्तिकर्ताहरु मूल्य सोध्न विचार गर्दैन तर बरु एक उत्पादन कच्चा माल, उपरोक्त लागत, श्रम, र मुद्रास्फीति जस्तै कारकहरु को आधार मा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ पत्ता लगाउँछ।
आँसु तल विश्लेषण: एक आँसु-डाउन विश्लेषण एक साना घटकहरु मा एक टुक्रा टुक्रा पार्छ एक व्यावहारिक मूल्य वा यसको संचालन अनुसार प्रत्येक घटक को मूल्य परिभाषित गर्न को लागी। औद्योगिक डिजाइन बाहेक, यो उपकरण प्रवीणता, क्रूरता, उत्पादकता, विश्वसनीयता, सुरक्षा, र अन्य लागू सुविधाहरु को आकलन।
लागत उपकरण को उपयोग को बारे मा अधिक जान्नुहोस् यस लेखमा.
3. चेकलिस्ट र उपकरणहरु
संगठनहरु लाई पनि मोडेल चेकलिस्ट र उपकरणहरु उत्पादन गर्न को लागी निर्देशकहरु को लागी उपयोग गर्न को लागी उत्पादन गर्नु पर्छ। यस्ता चेकलिस्टहरु सुझावहरु लाई रूपरेखा दिन्छन् कि एक निर्माता एक घटक हो कि बजेट मैत्री छ तर उही प्रकार्य प्रदर्शन गर्न सक्छ।
उपकरण ग्राफ र वर्कशीट हुन सक्छ कि निर्देशक लाई छिटो प्रदर्शन को एक मापदण्ड बनाउन, घटक र अन्य डीलरहरु को लागी लागत जुटाउन को लागी, र बजार को प्रवृत्ति को जाँच गर्न को लागी मद्दत गर्न सक्छ।
निर्देशकहरु लाई आवश्यकताहरु को एक स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्छ चाहे आपूर्तिकर्ता एक न्यूनतम आदेश मात्रा को माग गर्दछ। लक्ष्य मात्र एक घटक को परिष्करण बाट बच्न को लागी मात्र इन्वेंट्री लाई कम गर्न को लागी हुनु हुँदैन।
4. आपूर्तिकर्ता संग अधिक प्रभावी ढंग बाट कुराकानी
धेरै एयरोस्पेस र रक्षा कम्पनीहरु लाई विश्वास छ कि उनीहरु लाई पर्याप्त लाभ उठाउन को लागी आफ्नो डीलरहरु लाई मूल्यहरु लाई कम गर्न को लागी मनाउन को लागी, विशेष गरी प्रमुख कार्यक्रमहरु संग जोडिएको गहिरो जडित डीलरहरु छन्।
यी कम्पनीहरु मुख्यतः यो खेल शुरू हुनु भन्दा पहिले नै त्याग्छन्। जे होस् वार्ताहरु पार्क मा एक पैदल छैन, त्यहाँ केहि तरीकाहरु छन् कि एयरोस्पेस र रक्षा कम्पनीहरु लागत अनुकूलन गर्न को लागी उपयोग गर्न सक्छन्।
एक प्रतिरक्षा योग्य लक्ष्य मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्
धेरै जसो उत्पादकहरु लाई सामान्यतया एक दिईएको आपूर्तिकर्ता बाट एक घटक को लागी मौलिक अर्थशास्त्र को बारे मा थोरै अन्तर्ज्ञान छ। नतिजाको रूपमा, पहिलो चरण घटक को लागी खर्च गर्नु पर्छ को लागी एक सटीक लक्ष्य मूल्य संग आउनु हो। कम्पनीहरु यो हासिल गर्न को लागी धेरै दृष्टिकोण लागू गर्न सक्छन्।
कम्पनीहरु एक विशिष्ट घटक को लागी एक आपूर्तिकर्ता को लागत तल को दृष्टिकोण मा लागत वक्र तल सार्ने देख्छन्। अत्यधिक परिष्कृत उपकरणहरु को लागी, असेंबली लाइन बाट पहिलो समाप्त उत्पादन को लागत सयौं भन्दा धेरै छ, जो बारी मा हजारौं भन्दा धेरै खर्च हुन्छ।
कुल प्रणाली लागत को लागी गिरावट को दर एक कम्पनी को संचयी उत्पादन मात्रा र उत्पादन लागत को बीच एक मानकीकृत सम्बन्ध हो। एकाइहरु को संख्या, विधानसभा को प्रकार को आवश्यक छ, र प्रारम्भिक शुरू लागत, लागत वक्र देखाउँछ कि एक शीर्ष रेटेड डीलर एक निश्चित मात्रा पछि माग गर्नु पर्छ।
त्यहाँ एक लक्ष्य लागत निर्धारण गर्न को लागी विभिन्न तल-अप दृष्टिकोण छन्। उत्पादन संरचना दृष्टिकोण मेसिनरी को एक टुक्रा को उप विशेषताहरु मा हेर्ने entails। ती सामान्यतया मुक्त बजार मा उपलब्ध छन्, र कम्पनीहरु उनीहरु प्रत्येक को लागी एक उचित मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्, एक साथ श्रम लागत संगै उनीहरुलाई एकसाथ राख्न।
कम्पनीहरु पनि सम्बन्धित सुविधाहरु संग समान घटक को मूल्य मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यी कुनै पनि दृष्टिकोण मूर्ख प्रमाण छैन, तर ती सबै को उपयोग गरेर, कम्पनीहरु एक निश्चित घटक को सही लक्ष्य लागत को लागी एक दायरा को विकास गर्न सक्छन्। यसले उनीहरुलाई भरपर्दो र मापनयोग्य आधार दिन्छ आपूर्तिकर्ता संग कुराकानी को लागी लागत घटाउन।
आपूर्तिकर्ता संग लीभरेज बिन्दुहरु को विकास
आपूर्तिकर्ताहरु संग अधिक प्रभावी ढंग बाट सम्झौता गर्न को लागी एक वैकल्पिक तरीका लीभरेज को सम्भावित क्षेत्रहरु लाई बुझ्न को लागी हो। धेरै जसो अवस्थामा, कम्पनीहरु लाई धेरै क्षेत्रहरु मा उपलब्ध डाटा को उपयोग गरेर सोच्ने भन्दा धेरै लाभ उठाउन सक्छन्। पहिलो, जे होस्, मूल उपकरण निर्माताहरु (OEMs) कसरी आपूर्तिकर्ताहरु आफ्नो मुनाफा बनाउन र ती आय समय को एक अवधि मा वृद्धि गर्न इच्छुक छन् कसरी बुझ्न आवश्यक छ।
उदाहरण को लागी, केहि आपूर्तिकर्ताहरु आफ्नो पैसा को एक OEM को लागी एक प्रणाली को लागी मूल अनुबंध को भाग को रूप मा बेच्न को लागी बनाउन। अरुले सिधै सरकारहरुलाई या त विश्वव्यापी वा आफ्नो सरकार लाई बेचेर धेरै कमाउँछन्।
अझै पनी, अरुले मेसिनरी को लागी स्पेयर पार्ट्स को बिक्री को परिणाम पछि जोड दिन्छन् कि समय संग टाढा हुन्छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीको योजना बुझ्दा, कम्पनी कसरी आपूर्तिकर्ता संग कुराकानी को समयमा लाभ उठाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो संग कुराकानी गर्न को लागी निर्धारित गर्न सक्छ।
सेबास्टियन शमूएल भन्छन्:
अक्टोबर 6, 2021 मा 10: 25
उदाहरण को लागी, केहि आपूर्तिकर्ताहरु आफ्नो पैसा को एक OEM को लागी एक प्रणाली को लागी मूल अनुबंध को भाग को रूप मा बेच्न को लागी बनाउन। अरुले सिधै सरकारहरुलाई या त विश्वव्यापी वा आफ्नो सरकार लाई बेचेर धेरै कमाउँछन्। यो जानकारी साझा गर्न को लागी धन्यवाद।